Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland oo kulan laqaatey Odayaasha & Waxgaradka towfiiq | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland oo kulan laqaatey Odayaasha &...
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland oo kulan laqaatey Odayaasha & Waxgaradka towfiiq
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa wafdi wasiiro ah waxaa ay u dirtay degmada Towfiiq ee Bariga Gobolka Mudug,halkaas oo dhawaan uu dagaal culus oo khasaaro geystay ku dhex-marey laba maleeshiyo beeleed.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamanacad oo degmada Towfiiq gaarey ayaa kulan waxaa uu la qaatay Odayaasha & Waxgaradka towfiiq,isaga oo kala hadlay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedkaas.
Maleeshiyaadka dagaalamay oo kasoo kala jeeda Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa dagaalkooda waxaa ku geeriyoodey in ka badan 30 Ruux halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen.
Wasiir Dhamanacad ayaa ugu baaqay maleeshiyaadka labada beelood in xiisada ay dejiyaan,sidoo kalena looga baahan yahay Odayasha iyo Waxgaradka labada dhinac inay ka qeyb qaataan sidii xal loo gaari lahaa.
Dhawaan ayaa waxaa sidoo kale degmada Towfiiq gaarey Wafdi saraakiil ah oo uu hoggaaminayey Taliyaha Ciidamada dhulka Soomaaliya Cabdi Xamiid Maxamed Dirir,iyaga oo ku guuleystay inay xabad joojin dhex-dhigaan labada Beelood.